Daraasad lagu ogaaday in Haweenka Uurka leh ay u baahanyihiin WASMO BADDAN | shumis.net
Home » galmada » Daraasad lagu ogaaday in Haweenka Uurka leh ay u baahanyihiin WASMO BADDAN
Daraasad lagu ogaaday in Haweenka Uurka leh ay u baahanyihiin WASMO BADDAN
Haweenka oo ah halka uu ka nuurayo aqalka ayaa ah kuwa noloshooda dhan ay ku jirto waqtiyo kooban, waxaan ula jeedaa waa xili ay dhaleyso ama waali aysan tukan karin ama waa xili ay la daalaa dhaceyso korinta iyo naas siinta caruurteeda.
Ragga oo iyana ah mashiinka isku xira aqalka ayaa mararka qaarkood waxa ay u ekyihin kuwa iska indha tiraya waxa ay u baahantahay xaaskoooda taa oo ay ka midthay in nin ahaan ay ugu baahtantahay ama wehel ahaan ay ugu baahantahay.
Ninka isaga oo ka cabsanaya in dhib uu u geysto ayuu iga cararaa xasiiska xiliyada ay tahay xaamilada ama ay uurka leedahay ”’ sidaasina wxaa yiri Majid Abudlahi oo ah xaasle mudo 20-sano waxa uuna sheegay in xumaan ay ka aheyn ninka arinkaasi.
Haweenka ayaa la sheegaa in ay aad u rabaan xaaskooda xiliyada ay caadiga yihiin wax ka badan xiliyada ay uurka leeyihiin taa oo ay sheegaan aqoonyahanada in ay tahay sir u gaar ah haweenka.
waxaana la sheegayaa in biyaha ragga ay yihiin kuwa caawiya naaga foosha ka hor sida ay sheegayaan dhaqaatiirta caafimaadka ee ku taqasusay dhanka haweenka.
” Galmada aan ka helo xaaskeega xiliga aan uurka leeyahay waa ay ka qiima badantahay xiliyada kale” sidaasi waxaa tiri Maria Amir oo ah 30 sano jir u dhalatay dalka Kuwait oo wareysi siineysay TV-ga Al-carabiya ee aan kasoo xigtay nuqulkaan.
Raaxada iyo dareenka haweenka ay helaan xiliyadaan ayaa ah mid caafimaad ahaan xitaa la sheego in ay qurux badantahay ayadoona lagu macneeyay haweeneeda oo ah xiligaan mid ka diyaar badan kana raaxa qaadasha badan xiliyada kale waana dareenkooda oo xiligaasi iskugu yimaado hal meel oo qura’ sida daraasado badan lagu sheegay.
Title: Daraasad lagu ogaaday in Haweenka Uurka leh ay u baahanyihiin WASMO BADDAN